डन मनोज पुनको राजनीतिक यात्रा, ‘एकपछि अर्को इन्काउन्टरमा शंकै छ ’ : पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह
इन्काउन्टरमाथि शंका : भारतकाे गोवामा पक्राउ नेपालमा गोली !
नेताको आशीर्वाद : गुन्डालाई अभिशाप
शक्तिको आडमा धन्दा चम्काउने उद्देश्यले नेतासँग नजिकिएका गुन्डाको शृंखलाबद्ध अवसान
एमाले नेता गौतम गृहमन्त्री भएकै वेला चरीको ‘इन्काउन्टर’
चरी उपनामले कुख्याती कमाएका धादिङका दिनेश अधिकारी काठमाडौंको नयाँ बजारलाई आधार क्षेत्र बनाएर अपराधमा संलग्न थिए । थप उचाइ चढ्न एमाले प्रवेश गरेका उनी धादिङ–१ क्षेत्रीय कमिटीको उपाध्यक्षसमेत बने । राजनीतिक संरक्षणमा शक्ति बढेपछि उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई दिउँसै गोली हान्न पनि थाले ।
युवा संघ रुपन्देहीले कारबाही गरेपछि प्रतिशोध साँध्न ४ पुस ०७३ मा गोली हानी आफ्नै पूर्वअध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या गरे । तर, प्रहरीको पहुँचबाट टाढा भारतमा बसेर गिरोह चलाउन थालेका उनले २३ असोज ०७४ मा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या गराए । यसबाट पनि सुरक्षित उनले लगत्तै २१ पुस ०७४ मा बुटवल देवदहकै फर्निचर व्यवसायी बलु भनिने वसन्त पौडेलकोे हत्या गरे । अन्तर्राष्ट्रिय डन बन्ने महत्वाकांक्षामा अन्धाधुन्ध अघि बढेका उनी बुधबार प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । साथमा उनका सहयोगी सोम आलेको पनि ज्यान गएको छ ।
घटनास्थलबाट प्रहरीले एउटा पेस्तोल
मोटरसाइकल, ल्यापटप र केही डायरी पनि बरामद गरेको छ । मनोजले सुनीलकुमार मगरका नाममा नवलपरासीबाट पासपोर्ट (राहदानी) बनाएको र एटिएममा पनि अर्कै नाम राखेको पाइएको एसपी ज्ञवालीले बताए । भेटिएका प्रमाणमाथि अध्ययन गरेपछि थप तथ्य खुल्ने उनले बताए ।
यसरी भयो इन्काउन्टर
गुन्डा मनोज पुनसहितको टोली रुपन्देही आएको सूचना नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दियो । मनोज र उसका केटाहरू आएको सूचना प्राप्त भएपछि सीमानाकादेखि विभिन्न स्थानमा प्रहरी परिचालन व्यापक पारेका थियौँ । सिआइबीको प्राविधिक टोलीबाट उनीहरू रहेको ‘लोकेसन’ जानकारी लिँदै कारबाही बढाउँदै लग्यौँ । मनोजको घर भएको क्षेत्रमा पनि निगरानी बढायौँ ।
बुधबार बिहान ३ बजेतिर देवदह नगरपालिका–४ भवानीपुरमा उनीहरूसँग हाम्रो जम्काभेट भयो । पहिले उताबाट फायर भयो । गोली हाम्रो मोटरसाइकलमा लाग्यो । हामीले जवाफी कारबाही सुरु गर्‍यौँ । मनोज र सोम घाइते भए । तत्काल लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल पुर्‍यायौँ । बिहान साढे ५ बजेतिर अस्पतालमै उनीहरूको मृत्यु भएको हो ।
मनोज मुछिएका तीन हत्याकाण्ड
– ४ पुस ०७३ मा युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या भयो । देवदह नगरपालिका–८ खैरेनी चोकनजिकै अपराह्न गोली प्रहार भएको थियो । बायाँ छातीमा गोली लागेर तिवारीको मृत्यु भएको थियो । त्यसो त उनले ६ चैत ०७२ मा पनि तिवारीमाथि गोली प्रहार गरेका थिए । २ गोली प्रहार गरे पनि हत्याप्रयास असफल भएको थियो ।
– गत २१ पुसको बिहान ११ बजेतिर देवदहकै ढेकारमा स्थानीय व्यवसायी बलु पौडेलको गोली हानेर हत्या भयो । पौडेल पनि छातीमा गोली लागेर ढलेका थिए । घाइते उनलाई तत्काल लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याएपछि केहीबेरमै ज्यान गएको थियो । लगत्तै मनोजले स्थानीय पत्रकारलाई फोन गरी घटना आफूले गराएको जिम्मा लिएका थिए ।
– निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्यामा पनि मनोज मुछिएका थिए । गत असोज २३ मा दिनदहाडै काठमाडौंको शान्तिनगरमा गौचनको हत्या भएको थियो । उनको हत्या मनोजकै डिजाइनमा भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मनोजविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दाका खात
प्रहरीका अनुसार मनोजविरुद्ध धेरै मुद्दा परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) डिल्लीनारायण पाण्डेका अनुसार उनीविरुद्ध हत्या, लुटपाट, हातहतियार तथा खरखजाना, लागुऔषधलगायत मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
को हुन् सोम आले ?
मनोजका मुख्य सहयोगी सोमबहादुर आले सार्पसुटर हुन् । उनी विगतमा खुन डाँकाको अपराधमा पक्राउ परेको एसपी ज्ञवाली बताउँछन् । उनले पाल्पामा कैद भुक्तान गरेका थिए । गत माघमा पक्राउ परेका दुईजनासँग सोमको सम्पर्क रहेको र उनैले मनोज पुनसँग सम्पर्क गराएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । सोम पाल्पा कारागारमा रहँदा ती दुईजनासँग सम्पर्कमा आएको प्रहरीले जनाएको छ । पटक–पटक जेल परेका उनी मनोज समूहमा दोस्रो वरीयतामा रहेको प्रहरी बताउँछ । सिद्धार्थ नगरपालिका–५ उनको स्थायी घर हो ।
डन मारिएका तीन वटै इन्काउन्टरमा प्रहरीको एउटै दाबी छ, ‘प्रतिकारका लागि फायर खोल्दा मारिए ।’ तर, तीनवटै इन्काउन्टर सन्देहमुक्त भने देखिँदैन । किनकि घटनामा प्रहरीको गोली अभियुक्तको शरीरभरि बर्सिएका देखिन्छन् । तर, अभियुक्तको फायरले प्रहरीलाई छोएको पनि छैन ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले डनमाथि गरेका तीनवटै इन्काउन्टरमाथि शंका गरे । उनले भने, ‘प्रहरीले पछिल्ला दिनमा इन्काउन्टर भन्दै आपराधिक पृष्ठभूमिका केही संग्दिग्ध व्यक्ति मारेको छ । उनीहरूलाई साँच्चै मार्नुपर्ने स्थिति आएर मारिएको हो या अरू नै कारणले मारिन पुगे । मलाई शंका लाग्छ । किनकि अहिलेसम्म कुनै पनि इन्काउन्टरको उच्चस्तरीय छानबिन भएको छैन । छानबिन भए इन्काउन्टर नै भन्न सकिन्छ नत्र त हत्या हो । विदेशमा पनि इन्काउन्टरका नाममा हत्या भएका छन् । छानबिनपछि घटनामा संलग्न जेल गएका पनि छन् ।’
पूर्वएआइजी सिंहका अनुसार नेपालको कानुनले इन्काउन्टर सम्बन्धमा बोलेको छैन । तर, प्रहरीले जीवन रक्षाका लागि गोली हान्न सक्छ । त्यसबाहेक विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कसैबाट गोली तथा कुनै हतियार प्रहार हुने स्थिति आए त्यसवेला पनि जीवन रक्षाका लागि प्रहरीले गोली प्रहार गर्न सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् । प्रहरीको इन्काउन्टरमा पर्ने डनहरु यी हुन् !
प्रहरीलाई मन लागेका वेला कसैलाई पनि इन्काउन्टर गर्ने छुट कानुनले दिँदैन । नयाँ पत्रिकाबाट ।
यो पनि पढ्नुहोस् । चरीदेखि मनोज पुनसम्मको इन्काउन्टरको कथा
यो पनि पढ्नुहोस् । गुण्डामाथिको इन्काउन्टरमा प्रहरीको भेदभाव, जेलभित्र रमाउँदै पुनका पार्टनर बस्नेत